Ampifanaraho ireo fifandraisana sy kalandrie raha tsy misy google amin'ny android | Avy amin'ny Linux
Ampifanaraho ireo fifandraisana sy kalandrie raha tsy misy google amin'ny android
Christopher castro | | Android, GNU / Linux
Tsy torolàlana azo antoka ity, fa tolo-kevitra fotsiny momba ny fomba hiainana tsy misy google amin'ny android-nay.
Voalohany indrindra dia mila telefaona finday Android misy rom toa ny CyangenMod tsy misy gapps sy kaonty ao isika openmailbox.org (na mpizara hafa manana Owncloud ary miaraka amin'ny kaonty mailaka).
Mametraka izahay F-Droid, avy eo dia tadiavinay ilay rindranasa DAVdroid (0.9.0.4).
Manamboatra sy mandeha izahay. Hitanay ny telefaona mifandraika amin'ny Contacts sy Kalandrie amin'ny kaonty Owncloud.
Manamboatra ny mailaka amin'ny mailaka mailaka izahay nefa tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Android » Ampifanaraho ireo fifandraisana sy kalandrie raha tsy misy google amin'ny android
Tena mahaliana. Mpampiasa Openmailbox tokoa aho ary mitady hikarakara kely kokoa ny fiainako manokana, ka ity toro-lalana kely ity dia ho mora ampiasaina amiko.
Toy ny Ary ny torolalana?
Ny torolàlana dia miaraka amin'ireo sary. Skip the words because "Ny sary dia sarina teny arivo."
Nahoana no ilaina ny manana CyangenMod hanaovana azy? Tsy azoko, raha ny fivarotana F-Droid dia ho an'ny tahiry android ...
Ny tena dikan'izany dia ny android tsy misy gapp, mba tsy hanana rohy miaraka amin'i google.
Raha ny marina ny fanamarihan'i Lagarto, na dia tsy ilaina aza ny fananana CyangenMod hahafahana manatanteraka ny fizotrany, dia tolo-kevitra izany raha toa ka miaina tsy misy an'i Gapps ny olona iray.
Raha tsy mpitari-dalana ity dia maninona no avoakan'izy ireo izany?
Voalaza mazava tsara fa "Tsy mpitari-dalana tsy azo antoka io", mandohalika amin'ny lahatsoratra teo aloha momba ny How to be Anonyme amin'ny Android.
sli dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara sy fisaorana. Tsy fantatro fa nanompo ahy ilay app!
Mamaly an'i sli
Tsara, ary miaraka amin'io rafitra io, fampiharana kalandrie inona no tokony hampiasaina amin'ny finday hampifanarahana ???
Ilay tonga amin'ny toerana misy anao.
Ho ela velona F-droid sy ny sisa amin'ny alternatives mankany Googleland! 😀
Misaotra betsaka anao nanokana ny ampahan'ny fotoananao amin'ireto karazana torolalana ireto 🙂
Tongasoa eto ianao Alberto.
Ampidiro ny tranokalanao ary ianao dia karazana olona izay tia ahy koa, mitady hanafaka ny tenany amin'ny Google.
Sy izaho! Io dia aberration izay angatahan'ny google anao amin'ny kaonty mailaka handraisana ny zava-drehetra rehefa manomboka kalandrie ianao, avia! tonga mihitsy aza izahay!
Ary zavatra iray hafa Cristofer, ny lillipop dia mitovy amin'ny 6.0? Tsy milay mihitsy aho, voafehinao izany na dia manosotra fidiovana aza ianao
Julii: u dia hoy izy:
Hey, mbola miasa ve ity?
Ampifanaraho ireo fifandraisana nifandray taminao tao amin'ny google?
Te handefa ny google alv aho ary hametraka rom tsy misy gapps, somary efa nanao izany aho nefa izao mila ny contact-ko aiuda
Valiny amin'i Julii: u
Fitaovana METRICS GRIMOIRE hiteraka refy lozisialy.
GECOS: Ny fotodrafitrasa orinasa miorina amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.